Gandaki Sanchar » समृद्धिको चित्र, विकास विचित्र : चितवनको देवघाटमा सडकको बीचमै रूख राखेर कालोपत्रे
मंसिर ६, काठमाडौँ । देशको बजेट कहाँ खर्च भइरहेको छ ? कसरी खर्च भइरहेको छ ? चितवन देवघाटको यो चित्रले देशको विचित्र विकासलाई प्रस्ट देखाउँछ । जनताबाट संकलन गरिएको एक–एक रुपैयाँ राजस्वबाट चितवनमा सडक पिच गरिएको छ, जहाँ सडकको बीचमै ठाउँ–ठाउँमा सालका रूख ठिंग उभिएका छन् ।
धार्मिक स्थल देवघाट जाने आँपटारी–देवघाट सडक ९० वर्षदेखि सञ्चालनमा छ । तर, सडक अहिलेसम्म व्यवस्थित हुन सकेको छैन । मुग्लिन–नारायणगढ सडकबाट पश्चिम–उत्तरतर्फ वन क्षेत्र हुँदै देवघाट पुगिन्छ । तर, ठेक्काको पैसा पचाउन वातावणीय प्रभाव मूल्यांकन ९इआइए०समेत नगरी सडक पिच गरिएको छ ।
न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरी बनाइएकाले सडकबाट दुर्घटनासमेत बढी हुने डर बढेको छ । विगतमा समेत यस सडकमा रूखमा ठोक्किएर, हाँगा खसेर धेरै दुर्घटना भएका छन् ।साभार–नयाँ पत्रिकावाट
प्रकाशित मिति ६ मंसिर २०७७, शनिबार ०३:१४